Hahavonjy Ny Aterineto Rosiana Ve Ny Piraty? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Jolay 2013 16:59 GMT
Mahita ny asany tapaka ny Rosiana mpanohana ny fahalalahan'ny atrineto rehefa te-hifindra avy amin'ny fanohanana virtoaly mankany amin'ny tontolo andavanandro ry zareo — tamin'ny alahady farany teo, olona an-jatony monja amin'ireo an'arivony mitabataba ao amin'ny aterineto no mba azon'ilay fihetsiketsehana lazaina ho manohitra ny “lalàna manenjika ny piraty”.
Efa nanoratra momba ny fanitsakitsahana tsimoramora ny fahalalahan'ny aterineto ao Rosia ny Akon'ny RuNet, sy amin'ilay lazain'ny sasany fa fandadizan'ny trambon'ny sivana miakatra tsikelikely. Hita ho mahatratra ny loha izany fandadizan-trambo izany tamin'ny volana lasa teo, tamin'ny fandanian'ny parlemanta rosiana ny lalàna izay mitovy amin'ny SOPA an'i Etazonia [GV-MG]. Ny lalàna izay mihatra amin'ny voalohany aogositra, mampikatona izay tranonkala rehetra noho ny mety fitarainana fa misy singa na rohy voaaro [copyrighted] ao anatiny.
“Piraty” saina nihofafofa tao amin'ny fihaonan'ny fahalalahan'ny aterineto tao Moskoa. Pikantary YouTube
Namaly tamin'ny alalan'ny fanakatonana [GV] ny indostrian'ny aterineto rosiana [ru] , fandrahonana hisian'ny fitokonana mieli-patrana an'aterineto amin'ny voalohany volana aogositra, fanangona-tsonia, andiam-pitokonana, izay notontosaina tamin'ny 28 jolay. Toy izao ny fivakin'ny fanambarana isian'ny fihetsiketsehana [ru]:
Araka ny efa niseho, tsy dia mahamarika loatra ny tabataba amin'ny aterineto ny fitondrana rosiana. Mampatahotra azy ireo kokooa ny fisian'ny tena olona mivoaka an-dalambe.
Rehefa misy ny tolo-kevitra mampiahiahy (raha heverina ny “fahombiazan” ny hetsi-panoherana an-dalambe rosiana nihoatra ny herintaona), dia nomanina herinandro maromaro mialoha niaraka tamin'ny Antokon'ny Piraty Rosiana [ru], RosComFreedom [ru], ary ny Fikambanan'ny Mpisera Internet [ru], ny fihetsiketsehana an-dalambe ary notontosaina tamin'ny tanandehibe rezionaly tahaka an'i Kazan, Tomsk ary Novosibirsk [ru] ankoatra an'i Moskoa sy St. Petersburg. Saingy, tsy nahomby ry zareo tamin'ny fampirotsahana ny vahoaka an-dalambe. Ny fampisehoana/hetsi-panoherana tao Moskoa, ohatra, dia nahazo olona “300-500″ [ru] monja, araka ny filazan'ny Antokon'ny Piraty Peter Rassudov — izay atsasaky ny pejim-panoheran'ny VKontakte [ru] manana mpikambana 1105.
Lehilahy manao fiakanjon-karandoha sy mametraka sariohatra ny “Fahafatesan” ny RuNet mitarika ny fihaonana ao Moskoa. Pikantsary YouTube.
Tsy mahagaga indray raha nahombiazana kokoa ny hetsika an-tserasera, izay ao amin'ny tontolony, nataon'ny mpanohana ny fahalalahan'ny aterineto, indrindra tamin'ny fanangona-tsonia nofenoin-dry zareo ao amin'ny tranonkalan'ny Tomboky [na fandraisana an-tanan'ny] Ny Vahoaka Rosiana [ru]. Nahazo olona hatramin'ny 54.000 ny fanangona-tsonia [ru], izay mitady ny hanafoanana ilay lalàna tsy ara-drariny, ary mivaky toy izao:
Mino izahay fa tsy natao hikendrena hanoherana ny fizarana votoaty tsy ara-dalàna ity lalàna ity, fa natao hanoherana ny fivelaran'ny aterineto Rosiana, nokendrena hamotika ny aterineto, ary ankoatra izany, manitsakitsaka ny tombontsoan'ny orinasa misahana ny aterineto eto amin'ny firenena sy ny zon'ny olona hiserasera amin'ny aterineto.
Raha nihazakazaka fatratra ny isan'ny sonia voaangona tao anatin'ny iray volana, dia lavitry ny 100.000 ilaina mba ijerena ny votoatin'ny fanangona-tsonia, ka mampiseho ny fisefosefoany reraka:
Firan'ny fitambaram-bato azo mba hijerena ny fanafoanana ny lalàna “anti-piraty”. Pikantsary, 29 Jolay 2013.
Tsy hanaiky resy mora anefa ny mpahay teknika rosiana, nanao ny fomba rehetra hahazoam-bato — tahaka ny saina kely azon'ny tranonkala rehetra mpandray anjara apetraka eny an-tampon'ny pejiny (novolavolaina sy navoakan'ny [ru] mpisera iray tsy fantatra anarana tao amin'ny tranonkalam-teknika Habrahabr). Angamba ny fahatongavan'ny voalohany volana aogositra hanaovana ny “Fitokonan'ny Internet” (fikatonan'ny tranonkala mpanadray anjara) no mety hahazoana mpiserasera internet maromaro kokoa hifidy. Saingy, na hahazo vato 100.000 aza io fanangona-tsonia io, raha tsy miseho vatana midina an-dalambe sy hanery ny parlemanta ireo mpanohana virtoaly ireo dia tsy horaharahian'ny governemanta rosiana loatra io.